Zviuru neZviuru Zvinooneka Mutumbi waMai Tsvangirai muGlamis Arena
Zviuru nezviuru zvevanhu zvaungana muGlamis Arena muHarare zvichionekana nemutumbi waMai Susan Tsvangirai, mudzimai wemutungamiri wenyika, VaMorgan Tsvangirai, avo vakashaya mutsaona yemutokari neChishanu.
Vanhu vaungana kuzoonekana nemufi mutumbi usati waendeswa kuBuhera uko vari kuvigwa neChitatu, vanosanganisira mutungamiri weZCTU, VaLovemore Matombo, mutungamiri weZinasu, VaClever Bere, vamiriri vedzimwe nyika muZimbabwe, avo vanosanganisirawo mumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador James McGee, pamwe nevatungamiri vemasangano akazvimirira.
Vachitaura kuMethodist Church yekuMabelreign, uko kwaitirwa munamato wekurangarira Mai Tsvangirai, mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vati mhuri yekwaTsvangirai inofanirwa kutambira kuda kwamwari, nekuti mwari ndivo vakaita kuda kwavo. Vatiwo vachaita zvose zvavanokwanisa kuita kuitira kuti Mai Tsvangirai vazorodzwe zvine chiremera.
Vachitaurawo kuGlamis Arena, VaTsvangirai vatenda ruzhinji rwevanhu nerutsigiro rwavapa mhuri yavo munguva yekuchema mudzimai wavo.
Mai Tsvangirai vafa vava nemakore makumi mashanu nerimwe, uye vasiya murume, vana vatanhatu, Edwin, Garikayi, Rumbidzai, Vimbai, Millicent naVincent, pamwe nevazukuru vaviri, Gamuchirai naShawn.
Mune imwewo nyaya, vaimbove mukuru wemubatanidzwa wemauto, General Vitalis Zvinavashe, vashaya muHarare neChipiri. VaZvinavashe vanga vachirapirwa kuManyame Airbase Hospital muHarare.
Studio7 haina kukwanisa kuziva kuti VaZvinavashe vanga vachirwara neyi, uye kuti vachavigwa riini.